Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Delta Air Lines ithenga ngaphezulu kweenqwelo moya zeAirbus A30neo ezingama-321
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ukongeza inqwelo moya yeAirbus A321neo komeleza ukuzibophelela kweDelta Air Lines ekutshintsheni iinqwelo ezindala ngeejethi ezizinzileyo, ezifanelekileyo.
Imigca yomoya yeDelta iyalela ii-30 ezongezelelweyo ze-Airbus A321neo jets.
I-odolo entsha izisa ii-odolo zeAirbus ezibalaseleyo ezivela eDelta ukuya kuthi ga kwi-155 A321neos.
I-Delta ibonisa ubunkokheli obunoxanduva kwaye iphosa ivoti eqinisekileyo yokuzithemba ngoku kwi-A321neo.
I-Delta Air Lines iyalele ii-30 ezongezelelweyo zeAirbus A321neo iinqwelomoya ukunceda ukuhlangabezana neemfuno zeenqwelo moya zexesha elizayo. Inqwelomoya esandula uku-odolwa yongezwa kwiodolo yee-odolo ezikhoyo zohlobo lwe-125 zohlobo, zizisa ii-odolo ezivela eDelta ukuya kuthi ga kwi-155 A321neos.
"Ukongeza ezi nqwelo-moya komeleza ukuzibophelela kukaDelta ekutshintsheni iinqwelo ezindala ngeejethi ezizinzileyo, ezifanelekileyo, kunye nokunikezela ngamava abathengi abalungileyo kushishino," utshilo uMahendra Nair, Delta Air Lines'Usekela Mongameli oMkhulu- iFleet kunye neTechOps Supply Chain. "IDelta ibulela kakhulu uthelelwano olubanzi kunye neqela leAirbus ukuxhasa izicwangciso zethu zokukhula, kwaye sijonge phambili ekuqhubekeni sisebenza kunye kulo lonke ixesha lokufumana kwakhona nangaphaya."
"Njengokuba eli shishini lijonge ukuvela kulo bhubhane, iDelta ibonisa ubunkokeli obuthembekileyo kwaye ivota ngokuzithemba ngoku kwi-A321neo," utshilo uChristian Scherer, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo kunye neNtloko yeAirbus International. “Ngemiyalelo yeenqwelomoya ezingaphezulu ezingama-30 ezifunwa kakhulu kwihlabathi liphela, amahlakani ethu eDelta agxininisa indima ebalulekileyo abayibonayo kwi-A321neo ngokusebenza kwayo kwindalo esingqongileyo kwinkonzo yabathengi eyaziwayo kunye nokuthembeka iminyaka kwikamva. ”
Delta A321neos ziya kuxhotyiswa sisizukulwana esilandelayo Iinjini zePratt kunye neWhitney PW1100G ezizisa impumelelo ebonakalayo ngaphezulu kwenqwelomoya yangoku ye-A321 yeDelta. Ukuxhotyiswa ngezihlalo ezipheleleyo zabathengi abali-194 abangama-20 abakwiKlasi yokuQala, abangama-42 eDelta Comfort + ne-132 kwi-Main Cabin, i-A321neos ye-Delta iyakusasazwa ikakhulu kwinethiwekhi enkulu yasekhaya yenqwelomoya, egcwalisa i-Delta yangoku ye-A321 yeenqwelo moya ezingaphezu kwe-120. I-airline icwangciselwe ukufumana inqwelo moya yayo yokuqala eyi-155 A321neo ekuqaleni konyaka olandelayo.
Uninzi lwee-A321neos zeDelta ziya kusiwa kwiZiko lokuThengisa lase-Airbus e-Mobile, eAlabama. I-airline ithathe ukuhanjiswa kweenqwelo moya ze-Airbus ze-US ezingama-87 ukusukela ngo-2016.
Ukuphela kuka-Julayi, i-Delta yeenqwelo moya ze-Airbus zazingama-358, kubandakanya iinqwelomoya ezingama-50 A220, amalungu osapho angama-240 A320, amaqhekeza angama-53 A330, kunye neenqwelo moya eziyi-15 A350 ze-XWB.